Abanye abasebenzisi be-15 "beMacBook Pro baXela iMicimbi yeSandi | Ndivela kwi-Mac
Bali-15 abasebenzisi beMacBook Pro abaXela iMicimbi yeSandi
IMacBook Pro yazisa ukuwa kokugqibela kuyilelwe emhlabeni. Oku kubangela ukwanda kwentloko kwinkampani, ngeziganeko kwizixhobo zayo, ekunzima ukuzifumana kwinqanaba loyilo, kunye nakuvavanyo lweemveliso. Ngokunxulumene nezi ziganeko, kwiintsuku zamva nje abasebenzisi abaninzi bakhalaza ngeengxaki zesandi kwiMacBook Pro, ngakumbi i-15 ″. Akukho nkcazo ichanekileyo yengxaki: Abanye baphawula ngokungathi isandi sivalekile okanye kuthintelwe yinto abanye bayichaza ngokungathi ucofa ibhotile yeplastiki kancinci.
I-Apple iyazazi iingxaki, njengakwininzi iifom Ukusuka kwinkampani ngokwayo kukho izingqinisiso ezininzi kwezi ngxaki. Ngokusetyenziswa kwesiqhelo, isandi seMac siziphatha ngokuchanekileyo. Kodwa xa sifuna imisebenzi enzulu ngakumbi, njengokudlala imidlalo, okanye ukudlala iividiyo, iingxaki zezandi ezivakalisiweyo ziyavela.
Ngokukhawuleza ilizwe le-Mac liqalisile ukuphawula ngale nto. Yonke into ibonakala ibonisa ukuba ingxaki ivela kwiihenjisi zescreen . Kujikeleze bona kukho izinto zeplastiki ezidityaniswe neglu kwezinye iimeko. Ubushushu eli candelo liphantsi kwalo, kunye nobunzima obukhulu bescreen se-15 compared xa kuthelekiswa nescreen se-13 would iya kuchaza le ngxaki.
Ndicinga ukuba ingxaki eneneni ineehenjisi, njengoko kukho ubhetyebhetye bendalo kwi-aluminium ngasemva kwesikrini. Ndicinga ukuba ubushushu buchaphazele iglu kunye nendibano yesikrini seplastikhi.
Omnye umsebenzisi uphawula:
Ndiyakwazi ukudlala rhoqo isandi ngokucinezela kanye emazantsi endibano.
kunjalo, U-Apple ufunda ityala ngalinye ngokwahlukeneyo, kuba kwezinye iimeko kungenxa yokunxiba okubangelwa ngumsebenzisi, kwaye kwezinye iimeko kubonakala ngathi yingxaki yokwenza.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Ezahlukeneyo » Bali-15 abasebenzisi beMacBook Pro abaXela iMicimbi yeSandi
Umbono obonakalayo weMac Pro kunye neebays zokwandisa